उपत्यकामा अब लकडाउन खुकुलो हुने, बुधबार बैठक बसेर यसको टंगो लगाउदै « Kalakhabar
महाकुलुङ छेस्काम माध्यमिक विद्यालय व्यावस्थापन समितिका दुई उमेदवार पक्षबीच झडप,बिद्यालयको भौतिक संरचनामाथी क्षेती
जाडो मौसममा चार नेपाली युवाको बिश्व कृतिमान
पोखरा बागलुङमा जीप दुघर्’टना दुईजाको मृ’त्यू
प्रधानमन्त्रि ओलीको भनाई र व्यवहारमा पूर्व सभामुख नेम्वाङ असहमत,शनिबार उनले सार्बजनिक रुपमै मुख खोले
छ लाखको प्रलोभनमा झुटो बल’त्कारको जाहेरी दिने युवती पक्राउ
कुनै न्याधिशहरुलाई आफूले नभेटेको प्रधानमन्त्रि ओलीको जिकिर
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्रि शेरधन राईको दुलही पत्ता लाग्यो,को हुन त उनी ?
राष्ट्रिय एकता दिवस तथा २९९ औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै मण्डलामा व्यापक प्रर्दशन
नागरिक समाजद्वारा माईतीघर मण्डलामा बृहत प्रर्दशन
प्रभु बैंकका एक कर्मचारी कोरोना निकोभएर अफिस फर्कदा जागिर चैट
उपत्यकामा अब लकडाउन खुकुलो हुने, बुधबार बैठक बसेर यसको टंगो लगाउदै
प्रकाशित मिति : मंगलवार, २३ भाद्र २०७७ १५:२३
कलाखबर संवाददाता,२३,भदौं–काठमाण्डौं। काठमाण्डौं उपत्यका प्रशासनले चौथो पटक निषेधाज्ञा थप्ने वा नथप्ने भन्ने विषयमा छलफल थालेको छ । मंगलबार दिउँसो साढे २ बजे काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुबीच भर्चुअल संवाद हुँदैछ । कोरोना संक्रमण बढेपछि तीनवटै जिल्लाले भदौ ४ गतेदेखि निषेधाज्ञा लगाएका छन् । तेस्रो पटक थपिएको निषेधाज्ञाको समय बुधबार मध्यराति सकिँदैछ । तर अझै संक्रमण नियन्त्रणमा नआएकाले पूर्ण रुपमा खुला गर्न नहुनेमा तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकमत छन् ।
हालकै अवस्थामा निरन्तरता दिँदा पनि जनस्तरबाट विरोध हुनसक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बुझाइ छ । गृह मन्त्रालयले पनि निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउने गरी खाका प्रस्तुत गर्न भनेको छ । मंगलबारको संवादपछि निस्किने निष्कर्षबारे गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलगायतसँग छलफल गरेर उपत्यकाको निषेधाज्ञाबारे निर्णय हुने स्रोतको भनाइ छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने, ‘हामी छलफलमा छौं, बुधबार मात्र निषेधाज्ञाबारे निर्णय हुनेछ ।
के हुनसक्छ मोडालिटी ?
एक अधिकारीका अनुसार निषेधाज्ञाविरुद्ध जनस्तरमा आक्रोश पैदा हुन थालेको निष्कर्ष गृह प्रशासनको छ । त्यसैले मोडालिटी फेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनको हिसाबले निषेधाज्ञालाई कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने राय छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरुलाई बाँच्न गाह्रो पनि भएको छ । त्यसैले मुख्यतः आवश्यकता के हो भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ स्रोतका अनुसार दुई वटा प्रस्ताव आएका छन् ।
पहिलो, एक साता निषेधाज्ञा थपेर रोजगारीका क्षेत्रलाई खुला गर्ने । दोस्रो, जोर–विजोर प्रणाली लागू गर्ने गरेर सवारी साधन पनि चल्न दिने । यद्यपि जोर–विजोर प्रणाली यसै हप्ता लागू गर्ने वा एक सातापछि भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । ४ भदौबाट जारी निषेधाज्ञाका कारण एक सातापछि संक्रमण दर पनि घट्दै जाने कतिपय प्रशासकको विश्लेषण छ ।
त्यसैले तत्काललाई उद्योग, कलकारखाना र पसलहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर खुला गर्न दिनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । लतिलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले संसदीय समितिमा भएको छलफलमा निषेधाज्ञालाई सजीकरण गर्ने तर दशैंसम्म लैजानुपर्ने सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेका थिए । यसमा अन्य प्रशासक भने सहमत छैनन् । बरु दशैंसम्म जोर–विजोर प्रणालीलाई लम्ब्याउनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।
सांकेतिक तस्विर ४,माघ–काठमाण्डौं । सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिका छेस्काम माध्यमिक विद्यालयमा शनिबार विद्यालय व्यावस्थापन
४,माघ–काठमाण्डौं । पर्यटन व्यावसायी चार नेपाली युवाले जाडो मौसममा दोस्रो अग्लो हिमाल चढेर नयाँ कृतिमान
४,माघ–पोखारा बागलुङ । पोखरा– बागलुङ् राजमार्गमा शनिबार साँझ भएको जीप दु’र्घटनामा परी दुई जनाको मृ’त्यु
३,माघ–काठमाण्डौं । पूर्व सभामुख सुवास चन्द्र नेम्वाङ प्रधानमन्त्रि ओलीको भनाई र व्यवहार प्रति असहमत